Indraim-bava: inona sisa ny maha olombelona? | NewsMada
Indraim-bava: inona sisa ny maha olombelona?
Toy ny olona lazoin’ny homamiadana ity firenena ity, raha ny tranga nahoraka tato anatin’ny andro vitsivitsy izay no asian-teny. Tsy vao izao ny fitsaram-bahoaka, saingy na efa be aza ny voalaza sy ny fanentanana ny amin’ny tokony hanajana ny zon’olombelona, toa tsy nisy fiovana. Vao mainka aza mampihoron-koditra ny miseho, toy iny tany Betafo sy Antsirabe iny.
Mikasika ity raharaha ity hatrany, fanontaniana apetraky ny maro ny hoe «… fa tena mpangala-jaza ve ilay tompon-trano e? ». Raha tena hotadiavina anefa ny vahaolana amin’itony raharaha miafara amin’ny fitsaram-bahoaka itony, tokony hiadian-kevitra voalohany ny antony nahatonga ny fiovan’ny toe-tsaina: mora mandray tsaho sy honohono sady tsy miandry izay tena fitsarana marina.
« Ny hery, tsy mahaleo ny fanahy », hoy ny fahendrena malagasy. Taloha, na inona na inona nitranga, na eo amin’ny fifandraisan’ny olona roa na eo anivon’ny fiarahamonina, natao lohalaharana amin’ny fitadiavam-bahaolana ny dinidinika. Misaina aloha mialoha ny zava-drehetra, satria izay ny maha olona.
Ankehitriny, toa mihamaro ny ary vatana fa tsy ary fanahy… Raha misy zava-mitranga, tsy misy alaharo alaharo, araka ny fomba fiteny, fa avy hatrany dia ampiasaina ny sandry. Indraindray aza, mivonon-ko faty amin’ny tsy misy idirany ny sasany. Fa aiza no misaina sa tsy misaina intsony mihitsy?
Sanatria, rediredy sisa ny ohabolan-drazana manao hoe « Ny maty aza, mbola mahalala menatra, raha mbola tsy very ny saina ka tsy miongana ny fanahy ». Ary raha tsy misy intsony ny fanahy, inona sisa ny maha olombelona? Anjaran’ny tsirairay ny mamaly izany. Na izany aza, inoana fa mbola misy ny ambilom-bazana, hampiverina ny maha olona, izay efa nopotehin’ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-bola, ny kolikoly, ny lainga sy ny fitaky ny mpitondra, sns .